कलाखबर संवाददाता,६,साउन,–काठमान्डौं । राजधानीको नगार्जुन फेदी तार्केस्वर ८ शान्तिटोलमा रहेको मेगा पप्लिक स्कुल नमुनाको रुपमा स्थापित हुन थालेको छ । आफ्नो स्थापनाकालको छोटो समयमा नै सबै अभिभावक तथा आम बिद्यार्थीको मन जित्न सफल भंएको छ । उत्कृष्ट पठनपाठन, प्रयोगात्मक परिक्षण तथा साप्ताहिक कार्यक्रम जस्ता अकर्षक गतिविधिले विद्यार्थीको उच्च मनोबल वृद्धि भइ परिक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएको अभिवाकहरु बताउछन् । प्रशस्त मात्रमा खेल्ने चउर पनि रहेको तथा सफा...
आफुखुसी इन्टरनेट,सेवामा मूल्य बढाए कडा कार्बावाही गर्ने सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको दाबी
कलाखबर संवाददाता,५,साउन– काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले एक साता भित्र ईन्टरनेटको आधा मूल्य घटाउने दाबी गरेका छन् । यदि कुनै ईन्टरनेट संस्था,कम्पनीले अटेर गरि आफुखुसी मूल्य बढाएमा कडा कार्बाह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक आईएसपीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नमानेको र मूल्य बढाएको भन्दै तत्काल उपभोक्ताको हितमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित नियमन थाल्ने समेत मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।...
महिला उद्यमी महासंघद्वारा पत्रकार सम्मेलन,उद्यमशील्ता विकास कोष अभिवृद्धि तथा नीतिगत कार्यक्रम्मा जोड
कलाखबर संवाददाता,४,साउन–काठमाडौं । महिला उद्यमी महा संघ नेपालले राजधानीको अन्नपूर्ण होटलमा बुधबार एक पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । उद्यमशील्ता विकास कोष अभिबृद्धि,सम्भावना, चुनौती र नीतिगत सम्बन्धी गरिएको सो कार्यक्रम्मा सबै उद्यमशील महिलाहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । सिफारिस सम्बन्धी नीतिपत्र उपत्यका बाहिरका महिला उद्यमीले उद्योगको विषयमा प्रस्तावपत्र लेख्ने सीप नहुँदा सम्बन्धित निकायबाट बजेट ल्याउन नसकेको समेत उहाँहरुको धारणा थियो । सो क्रममा महिला उद्यमी संघ धनकुटाका...
राजकुमार राई,३१,असार–काठमाडौँ । अज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले एक साहित्य सृजना कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । त्रिदिवसीय बृहत् हिमवत्खण्ड कला साहित्य सम्मिलन–२०७५ अन्तर्गत चन्द्रागिरि सिर्जना यात्रामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत स्वदेश र विदेशी त्यहाँ पुगेर साहित्यकारहरु सिर्जनामा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो एक साहित्यिक सिर्जनासमेत गरी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । अन्य सहभागी स्रष्टाहरुले समेत स्थलगत अवलोकनपछि साहित्य सिर्जना गर्न...
एलिसा र मुस्कानले गरे अक्षयकोष स्थापना
कलेस्ती, असार २८- स्वर्गिय पिता केशव थापाको स्मृतिमा बेल्जियम रहेका एलिसा थापा र मुस्कान थापाले क्यामिन माध्यामिक विद्यालय, कलेस्तीमा १ लाख रकमको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । पिताको नाममा स्थापित “केशव थापा स्मृति छात्रबृति अक्षयकोष” बाट प्राप्त हुने व्याजले क्यामिन माध्यामिक बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने असाह्य, टुहुरा र गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीको पठन पाठनमा सहयोग पुग्ने एलिसा थापाले बताइन् । यस्तो सहयोगले शैक्षिक रुपान्तणमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ ।...
मरे नछोड्ने बाचाका साथ फैसला गर्न किन पुगिन् अदालत गायीका मेनुका राई ? भिडियो हेरौं
राजकुमार राई,१४,असार–काठमाण्डौं । सिरैमा सिरबन्दी कानैमा झुम्का,नाकैमा ढुङग्री मुन्द्री र बुलकी अनि रातो पछयौरा र मखमलको चोली, सारीमा सजिएका दुई थितिहरु सुन्दरताको लहर छर्दै उभीरहेका हुन्छन् । जहा सेतो र रातो रङको हाफ् टिसर्ट लगाएका सिभिल ड्रेसमा दुई जना युवाहरु आउछन् र एक्कासी अदालत हिड्ने धम्की दिन्छन् । थितिहरु अचम्ममा पर्छन् । उनीहरु हुन् अहिलेका निकै चर्चित गायीका मेनुका राई र मोडल ज्योति मगर । केहि छिन पछि...
कलाखबर संवाददाता १३,असार – काठमाडौं । केही बर्षदेखि नियमित आयोजना हुँदै आएको लोकदोहोरी अवार्डले यो बर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । लोकदोहोरी कलाकार र श्रृजनालाई लक्षित गर्दै यो अवार्ड आयोजना हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समिति, काठमाडौंको आयोजनामा आउँदो असोजमा सम्पन्न हुने यस ‘छैठौं राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड–२०७५’ का लागी आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन...
पे्मीको मीठो मायाले जाङमु ईन शेर्पालाई कसरी पागल बनाए ? हेरौ भिडियो
कलाखबर संवाददाता,१२,असार–काठमाण्डौँ । माया प्रेम जिवनको अपरिहार्यता मात्र नभएर प्रकृतिले नै सृजना गरिदिएको एउटा सुन्दर उपहार हो । पे्रममा नै हरेक सृष्टिअडिएको छ । हरेक कलाकार र संगीतकारले यी नै कुरा आफ्नो शब्द रचना,अभिनय तथा स्वरका थँुगाहरुमा पस्किरहेका हुन्छन् । यहि सन्दर्भमा प्रविसा अधिकारी र उत्तम थापा मगरको आवाजमा सजिएका यो पागल मन गीत बजिरहेको छ । अगाडी तिर सुस्तरी पवनको स्पर्शसँग मुस्कानको लहर छोड्दै श्रङगारले सजिएका दुई...
कामा छिरिङ शेर्पाद्वारा आरोहण यात्रा संग सम्बन्धित वृतचित्र निर्माण
कलाखबर संवाददाता,९,असार,काठमाण्डौं । हिमाल आरोहण यात्रासंग सम्बन्धित वृत्तचित्र कामा छिरिङ शेर्पाले निमार्ण गरेका छन् । काठमाण्डौ देखि सगरमाथाको चुचुरो सम्मको आरोहण यात्रा गर्दा आई पर्ने विभिन्न चुनौती तथा समस्याहरुलाई समेतिएर बनाएको. सो वृत्तचित्र शनिबार पत्रकार सम्मेल गरि शेर्पाले सार्बजनिक गरेको हो । राजधानी लाम्जीम्पात सम्पदा गार्देनमा आयोजित सो कार्यक्रम्मा प्रमुख अतिथिको रुपमा शेर्पा संघका अध्यक्ष आङ दोर्जे शेपा रहेका थिए भने विशेष अतिथिको रुपमा एण्ड. एम. ए.पूर्व अध्यक्ष...